Chọpụta ihe a ga - ahụ n’otu ụbọchị n’obodo Segovia | Akụkọ Njem
Segovia, obodo dị na obodo Castilla y León, na-adọta ọtụtụ ndị ọbịa maka nnukwu ọwa mmiri a sitere na Roman, nke nwere ọnọdụ nchekwa zuru oke. Mana obodo a nwere ike inye ọtụtụ ihe ndị ọzọ na mgbakwunye na ama a ama ama ama nke ghọrọ akara ya. Echefula na ọwa mmiri ahụ na obodo ochie ya ka UNESCO kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site.
Na obodo Segovia anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-ahụ naanị n'otu ụbọchị. Nnukwu uru nke obodo a bụ na ọ pere mpe ma ọ ga-adịrị anyị mfe ịhụ akụkụ ya niile. Dị ka obere obodo ndị ọzọ, ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na ihe na-adọrọ mmasị, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ha n'otu ụbọchị.
1 Ọwa mmiri nke Segovia
2 Ogige Azoguejo
3 Oflọ nke Ọnụ
4 Katidral ahụ na onyeisi obodo Plaza
5 Alcazar nke Segovia
6 Mgbidi Segovia
7 Obodo Ndị Juu
Ọwa mmiri nke Segovia
Nke a na ịwa ọwa mmiri nke ndị Rom bụ akụkụ kasị dị ịrịba ama nke obodo ahụ na nnukwu ebe mmasị. Ọwa mmiri ahụ butere mmiri n'obodo ahụ, ọ bụkwa nnukwu ọrụ injinịa sitere n'aka ndị Rom. Emere ya na 15 narị afọ AD. C. n'oge iwu nke Trajano na Adriano. Ọ bụ ezie na akụkụ ya a ma ama bụ nke dị na obodo, nke bụ eziokwu bụ na ọwa mmiri a na-aga ihe dị ka kilomita XNUMX site na mmiri Fuenfría na ugwu.
El ọwara mmiri dị kpọmkwem na Plaza del Azoguejo. Ọ bụ obere na mma square. Ọ bụrụ n’ị rituo na steepụ ụfọdụ ị ga-enwe nkwenye dị egwu banyere ọwa mmiri iji nwee ike ịse foto kacha mma. N'ebe a ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụlọ ochie, see foto nke ọwa mmiri n'okpuru wee chọpụta ụfọdụ ụlọ nri na-atọ ụtọ. Echefula na Castilian gastronomy nwere ezigbo aha.
Oflọ nke Ọnụ
Site na Plaza del Azoguejo anyị nwere ike ịgakwuru Plaza Mayor nke obodo ahụ. Maka nke a, anyị ga-agabiga otu n'ime ya kacha mara amara n'okporo ámá, nke bụ Juan Bravo. N’okporo ámá a bụ ama Casa de los Picos. Ozugbo ị hụrụ ya, ị ga-amata ihe kpatara o jiri nweta aha a dị egwu, ọ bụkwa na ihu ya nwere ihe karịrị narị narị isii granite. N'okporo ámá a, anyị nwekwara ike ịhụ Plaza de Medina del Campo na chọọchị San Martín. Churchlọ ụka a bụ Romanesque n'ụdị Mudejar na n'ime ya bụ eserese na ili nke ezinụlọ Herrera, ezinụlọ dị mkpa narị afọ nke XNUMX.
Katidral ahụ na onyeisi obodo Plaza
La Katidral Segovia bụ ihe ncheta ọzọ dị egwu ọ dịkwa na Plaza Mayor, nke kachasị mkpa n’obodo ahụ. Katidral nke Santa María bụ nke atọ kachasị ukwuu na Spain niile, nke a makwaara dị ka Lady nke Katidral maka ịdị mma ya na akụkụ ya, nke na-adọta uche. E wuru ya n'etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX na ụdị Gothic nke nwekwara mmetụ ndị Renaissance. Enwere ike ileta ya maka ọnụ ahịa dị ọnụ ala ma na-agagharị agagharị na ọbụlagodi nleta abalị na-ahazi.
Nke a bụ ihe ọzọ dị ịtụnanya na-eme Segovia ka ọ bụrụ obodo kwesịrị ileta. Ebe a e wusiri ike bụ ogige ndị Rom, obí eze na ọbụna ụlọ mkpọrọ. Ihe anyị nwere bụ obí eze site na mbubreyo Middle Ages nke na-apụ apụ maka oke ịdị mma ya na maka igosipụta ịma mma nke ụlọ ikpe Castilian ahụ. Mgbe ị na-eleta Alcazar echefula thelọ Elu nke Juan II, nke na-ejedebe na nnukwu panoramic terrace nke ị nwere echiche dị egwu banyere obodo ahụ. N'ime ebe ewusiri ike ị nwere ike ịga ebe dịka imlọ Chimney ma ọ bụ ime ụlọ ochie.
La Echebeghị mgbidi Segovia n'ozuzu ya, ma akụkụ buru ibu n'ime ya bụ, ya mere ọ bụ akụkụ ọzọ iburu n'uche n'oge nleta ahụ. Nke a bụ obodo nwere mgbidi nke nwere ọnụ ụzọ ámá atọ, nke San Cebrián, nke Santiago na nke San Andrés. Tupu e nwee ọnụ ụzọ ámá ise ma o doro anya na e nwere mgbanwe na mgbidi ahụ, n'ime ọtụtụ narị afọ ndị gafere. Nwee ya n'agbanyeghị na ọ nwere ike, nke a bụ isi ihe ọzọ dị mkpa. N’ọnuụzọ nke San Andrés bụ isi ihe ọmụma nke mgbidi ahụ, yabụ anyị nwere ike ịmalite ebe ahụ.
El ochie ochie ndị Juu Ọ bụ otu n'ime akụkụ ochie nke obodo ahụ na-akpali mmasị dị ukwuu. O doro anya na ọ bụ obodo kachasị mma na Segovia niile na ọ bụ ebe ndị Hibru bi ruo mgbe ndị Ọchịchị Katọlik batara n’ọchịchị wee chụpụ ha. Synlọ nzukọ ochie ahụ bụ otu n’ime ebe a pụrụ ịga leta n’obodo a mara mma.
A maara Antonio Machado nke ọma na Castilla na ọdịdị ala ya. Ọ bụ onye edemede a ma ama nke bụ bi na Segovia ọtụtụ afọs Ọ bụ ya mere n'ụlọ ebe ezumike nka ebe o bi nwere ebe a na-edebe ihe mgbe ochie nke a na-edebe uri a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Segovia » Ihe ị ga-ahụ na Segovia n'otu ụbọchị